Ubuchwepheshe obusezingeni kwi-X5 entsha | Isolezwe
Ubuchwepheshe obusezingeni kwi-X5 entsha
Ezezimoto / 7 December 2018, 3:13pm / MCEBO MPUNGOSE
IBMX X5 entsha
UKWANDA kwezimoto ezincintisana neBMW X5 kubukeka kubaphonsele inselelo abakhiqizi bale moto baseGermany.
Ngeledlule abakwaBMW bethule isizukulwane sesine samaX5 kuleli abathemba ukuthi sizoqhubeka lapho kugcine khona edlule.
Selokhu yethulwa sekudayiswe amaX5 angu-2.2 million emhlabeni jikelele.
Kuleli kutheleke izinhlobo ezimbili, okuyi yiX5 x Drive30d neX5 M50d, okuyizona zinhlobo ezidayise kakhulu eNingizimu Afrika kamuva, ngokusho kwabakwaBMW. Eyinjini kaphethroli kuthiwa izofika ngonyaka ozayo.
I-X Ddrive 30d ishaya ngenjini eyi-3.0 litre turbodiesel, ekhiqiza amandla awu-195 kW ne-torque engu-620 Nm.
Ukusuka ku-0 iye ku-100km/h kuyithatha imizuzwawna engu-6.5 kanti ijubane elikhulu ngu-230 km/h.
Isikhulu esiyi M50d naso sishaya ngenjini eyi-3.0 litre kodwa enamandla athe xaxa kwazise iyi-quad-turbodiesel.
Ifuqa u-294 kW ne-torque engu-760 Nm kanti ukusuka ku-0 iye ku-100km/h bathi kuyithatha imzuzwana engu-5.2 kuthi ijubane elikhulu libe ngu-250 km/* . Zonke zisebenzisa i-gearbox ezishintshayo oyi eight-speed Steptronic.
Ngaphandle kwamandla, benze umsebenzi oncomekayo ngendlela eyakhiwe ngayo umzimba ngokunjalo nangaphakathi.
Usayizi wayo uthe xaxa, okungamangazi kakhulu kwazise kumele ibe nkundlwana kunomfowabo omncane i-X3, oyibhobhodleyana.
Ngaphakathi inobuchwepheshe obusha okubalwa kubo ama-screens amabili ayingxenye yeBMW Live Cockpit Professional. Iphinde ibe ne-gesture control, okwazi ukunciphisa nokunyusa umsindo ngayo emotweni unyakazisa umunwe.
Izihlalo zayo zesikhumba zivuleke kahle kanti ziyakubhucabhuca uma ukudinga lokho. Iphinde ibe nezindawo zokufaka izinkomishi ezikwazi ukubandisa noma ukushisisa isiphuzo sakho.
Engingakuthandanga nje ngaphakathi igiya layo eliyi-crystal engilibone lingahlezi kahle kulobu buhle obuzothile obungaphakathi kule moto.
Noma uyishayela ubuchwepheshe buhamba phambili ekulekeleleni umshayeli njengoba ine-Active Cruise Control ezimela yona noma inciphise isivinini uma kunemoto engaphambili.
Kwabasashaywa wuvalo uma bekhipha imoto egaraji, le moto ingaba wusizo olukhulu njengoba ikhumbula indlela engene ngayo bese iyazikhipha yona.
Ikwenza lokhu ngokuqopha ibanga eliwu-50 metres lokugcina olishayelile ngaphambi kokuthi ime.
Okunye kwezokuphepha kukhona ubuchwepheshe be-Active Driving Assistant ekubhekela i-blind spot, iLane Departure Warning uma ugudluka emzileni wakho, iRear neFrontal Collision Warning, Pedestrian, kanti iphinde ikwazise isivinini okumele ngabe uhamba ngaso emgwaqweni okuwona.
Ngesikhathi ngiyivivinya emgwaqweni i-xDrive 30d engikuqaphelile ukubamba kwayo kahle amakhona ngokunjalo noma isendaweni enyukelayo izihambela kalula ngenxa yamandla enjini yayo.
Bengizibuza ukuthi ingaba ngcono kanjani i-M50 d kodwa ngithe sengiyishayela ngezwa ukuthi iyisilwane kakhulu yona ngoba ishaya ngamandla athe xaxa kanti nasemgwaqweni owubhuqu ingena ngamandla.
Njengoba nezinye izinkampani zilokhu ziqinise njalo kumaSports Activity Vehicles (SAV) iBMW bekudingeka ukuthi igadle ngakho konke enakho kwiX5 entsha, engicabanga ukuthi bakwenze kahle ngaphandle kokulahla imvelaphi yale moto.